वैवाहिक जीवन खुसि बनाएर राख्नको लागि पिउनु होस् सजिवनको सुप - ज्ञानविज्ञान
सजीवन(ड्रमस्ट‍िक) को प्रयोग धेरै किसिम को बिमारी को उपचार गरिने गरिन्छ। रुघा खोकी, घाटी चिलाउने र छाती मा कफ़ जम्दा पनि सजीवनको प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ।
तपाइले चाहनु भयो भने तरकारी बनाएर वा उमालेर गर्न सक्नु हुनेछ। अथवा यसलाई पानीमा उमालेर त्यो पानी लाई पिउनु पनि धेरै फाइदा गर्दछ। यदि तपाई लाई स्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ भने पनि सजीवनको प्रयोग तपाईहरु को लागि फाइदा गर्छ।
सजीवन को सुप पिउदा सबै भन्दा धेरै फाइदा गर्दछ। यसमा भरपुर मात्रामा भिटामिन ‘सी’ पाइन्छ। भिटामिन ‘सी’ को बदलामा यसमा बीटाकैरोटीन, प्रोटीन हुन्छ। यो म्याग्निज, म्याग्नेशियम, पोटाशियम र फईबर प्रसस्त मात्रा मा पाईन्छ। यो सबै तत्व शरीरको पूर्ण विकाशका लागि धेरै जरुरी छ।
सजीवनलाई सानो सानो टुक्रा बनाउने । दुइ कप पानी लिने र यसलाई सानो आगोमा उमाल्ने । जब पानी उम्लिन थाल्छ त्यसमा काटेको सजीवन हल्नुहोस । तपाईलाई मन लाग्छ भने त्यसमा सजिवनको पत्ता पनि हाल्न सक्नु हुनेछ। जब पानी आधा बाँकी सजिवनको बिचको गुदी निकालेर माथिको भागलाई हटाई दिनुहोस।
यसमा थोरै नुन र मरिच मिसाएर पिउनुहोस।
सजीवनको सुप पिउनको फाइदा:
१ . सजिवनको सुप को नियमित सेवन गर्नाले सेक्सुअल हेल्थ राम्रो हुनेगर्दछ। सजीवनले महिला र पुरुषको लागि समान फाइदा गर्दछ।
२ . सजीवनमा एंटी ब्याकटेरियल गुण पाइने गर्दछ जुन धेरै किसिमको संक्रमण बाट सुरक्षित राख्न सहयोग गर्दछ।
३.सजिवनको सुप पाचन तन्त्र लाई पनि बलियो बनाउने गर्दछ। यसमा भएको फाइबर्सले कब्जियतको समस्या हुन दिदैन।
Topics #सजीवन को फाइदा
Don't Miss it एक चम्चा नुन नै काफी हुन्छ सुन्दर अनुहार बनाउन, जान्नका लागि तल पढ्नुहोस्
Up Next खुर्सानी खादाका फाईदा र बेफाइदा के के हुन्, जानी राख्नुहोस